सोमबारका दिन गर्नुस् यी पाँच काम मनले चिताएको पुग्नेछ(ॐ नमः शिवायः) – Chautari Online
October 12, 2020 221
३.त्यस्तै सोमबारको विहान बेलपत्रमा सेतो चन्दनको टीका बनाएर शिवलिं गको पूजा गर्नाले पनि फलिफाप हुन्छ ।४. सोमवारका दिन आफ्नो पायक पर्ने शिव मन्दिरमा पुगेर शिवलिं गमा दूध चढाउनुपर्छ ।
उक्त दूध तामाको भाडामा ल्याएर आफ्नो व्यापार व्यवसाय गरेको ठाउँमा पूर्ण श्र द्धाका साथ छर्किदै ‘ॐ नमः शिवायः’ मन्त्रको जप गर्नाले व्यवसायमा श्रीवृद्धि हुने मान्यता राखिन्छ ।५. ‘ॐ नमो धनदाय स्वाहा’ मन्त्र कुनै शिव मन्दिरमा गएर रुद्राक्षको मालाले ११ पटक जप गर्नुहस् । यस मन्त्रको जप गर्नाले धन लाभ हुने धार्मिक विश्वास छ ।
यो पनि:नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका बलर सन्दीप लामिछानेले त्रिवि क्रिकेट मैदानमा कार्यरत कर्मचारीलाई एक लाख रूपैयाँ सहयोग गरेका छन्।क्वारेबियन प्रिमियर लिग खेल्न ट्रिनिडाड एण्ड टोबागो जानुअघि सन्दीपले उक्त सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएका थिए। सहयोग रकम आज हस्तान्तरण गरिएको हो। सन्दीपका व्यवस्थापक रमण सिवाकोटीले आज रकम हस्तान्तरण गरेका हुन्।
को भिड-१९ महामा रीका कारण समस्यामा परेका कर्मचारीलाई सन्दीपले राहतस्वरूप रकम प्रदान गरेका हुन्। ‘‘सन्दीप फर्किन ढिला हुने भयो। त्यसैले यस्तो अवस्थामा अप्ठ्यारोमा परेका कर्मचारीहरूलाई रकम हस्तान्तरण गरिएको हो,’’ सिवाकोटीले भने।
क्वारेबियन लिग खेलेर फर्किएका सन्दीप अहिले आईपीएल खेल्न दुबईमा छन्। सन्दीपको टीम दिल्ली क्यापिटल्स लिग चरणमा ६ खेलबाट १० अंक जोड्दै शीर्ष स्थानमा रहेको छ। दिल्लीले आजै मुम्बई इन्डियन्सविरु द्ध खेल्दै छ।
तथापि, सन्दीपले यस सिजन टीममा स्थान बनाउन संघर्ष गरिरहेका छन्। सन्दीपले यसअघि कोभिड-१९ रोकथामका लागि सरकारले स्थापना राहत कोषलाई एक लाख रूपैयाँ सहयोग गरेका थिए।
Prevअब छोरी भएका घरमा सरकारले जोडिदिन्छ निःशुल्क इन्टरनेट
Nextनियमित यौन सम्बन्धले मृगौलाको पत्थरी निको हुने
कुन राशीका व्यक्ति कती भाग्यमानी ?
उपत्यकाका ३२६ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
काठमाडौं उपत्यकामा २२ सय ८३ संक्रमित थपिए, कुल संक्रमितको संख्या ४४ हजार नाघ्यो